5 Of The ezithengisayo othengela Best EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Of The ezithengisayo othengela Best EYurophu
Xa kusiyiwa phesheya kolwandle, Sonke siyalithanda ithuba lokuya kuthenga, usapho kunye nabahlobo! Kuvakala eyahlukileyo kwelinye ilizwe, akunjalo? Xa kuziwa eYurophu, shopping ke alidanisi. Akaneli nje ukuba babe izixeko zokuthenga odumileyo ezifana London ne Milan, Ikwanazo neevenkile ezininzi ezinikezela ngezaphulelo ezinkulu kwisitrato esiphakamileyo ukuya kwiimpawu zodidi oluphezulu. Ezantsi we iinkcukacha 5 Of The ezithengisayo othengela Best EYurophu.
ladies, onokufuna ukuba ube kancinane esicengayo ukubonisa oyindoda yakho ababehamba ukuba badle, kodwa isithembiso iilebhile yokuluka ngamaxabiso kwanciphisa, kuyinto ebaluleke nangakumbi, umgudu. Kwaye ukuba lomlungu okanye isoka uyaqiniseka, nemiti eKFC kuhlala inala iivenkile zekofu apho bonke bangahlala kwaye qaphela abantu ezintle ngeli xesha uthenga nide uyeka!
Barberino ezakhiwe Indlela yokuphuma, ElamaTaliyane
EKFC isendaweni 30 km ukusuka Florence kwaye ifikeleleka ngendlea lula ngololiwe okanye imoto okanye ibhasi kwiyure kangangesiqingatha. I Barberino uMyili umthombo kwilali yokuthenga: ibekwe kwindawo ipoma, kukhangeleka ngathi kwidolophu encinane kunye abaninzi “izindlu” ndawonye ukuba afake ezivenkileni. Phakathi iingenelo zifunyanwayo efana Barberino uMyili Indlela yokuphuma Akuthandabuzeki xi aphezulu noovimba yemiyinge eziphambili indawo elinganiselwe.
Uya kufumana yemiyinge abaziwayo Italian ngamazwe ezifana Puma, Dolce & Gabbana, Cavalli, Patrizia Pepe, michael eekore, Pinko, Furla, kodwa uninzi lwamanye amazwe afana Guess, Twin Set, yokungalingani, Hugo Boss, Nike, no Adidas, ukubiza ezimbalwa phakathi kwezona zaziwayo. Ukuba uyoyika yokulahleka kwaye ulahlekelwe zakho ozithandayo brand, behamba beya embindini mall uya kufumana mahala, imephu eneenkcukacha Indlela yokuphuma.
Kwakutheni ukuze sigqibe ukongeza le ezishishina zethu Best othengela eYurophu? Le igcina isithembiso izaphulelo of 30 ukuba 70% kuthelekiswa kwixabiso lokuthengisa apha iivenkile eziqhelekileyo yaye ngokufuthi kukho promotions ezikhethekileyo ngaphezulu! Ukuba nithanda iintlobo ezinkulu, nje uqalise kuphela umngcipheko lokufumana sijongana ezithile enkulu, ukubamba loo lokhwe okanye ibhegi, okanye ezo zihlangu uzibonileyo ngexabiso eliphezulu kwivenkile yesixeko.
Bicester Village, Izikumkani Ezimanyene
Bicester Village has yonke into ufuna xa kufikwa isaphulelo engaxhaswanga lokuthenga. Siye wongeze Bicester kwiivenkilana zethu othengela Best kuluhlu eYurophu njengoko yenye zawo ezingqongileyo iziyolo neevenkile phezulu kwi UK. It phakathi kakhulu ethandwa izindawo izivakashi e England bokufika, kunye Buckingham Palace kunye Tower of London.
Akubalulekanga nje ukuba abakhenkethi, nakuba. abahleli Fashion kunye iintatheli iindwendwe rhoqo kwaye ngoko i Kate Middleton, NeTshawekazi laseYork bashiya ilifa Cambridge. Waye kanye ukubonakala ukuthenga zokulala for Prince George. Enoba yasebukhosini okanye umhleli udumile, ngubani akayithandi izisulu?
La Vallee Village, Serris, Fransi
Fumana amava zokuthenga ekhethekileyo xa udibana open-air e La Vallee Village kufuphi Paris. Kukho ngaphezu 110 boutiques yefashoni eyaziwayo kwihlabathi liphela. Kukho kwakhona brand yokuphila banikela ingqokelela yazo yangaphambili ngexesha ngamaxabiso kwanciphisa, unyaka wonke.
La Vallee Village yenye zokuphuma Shopping Best eYurophu. Ulikhaya yemiyinge zindala kwaye inikeza nokukhethwa iinkonzo zikhethwa ngononophelo ukuqinisekisa iindwendwe sixhamle Usuku angeke ngaphandle.
Ilali ilikhaya ngaphezulu kwe 110 boutiques of brand ezidumileyo kubandakanya: Armani, Calvin Klein, tarven, Charles Tyrwhitt, CH Carolina Herrera, coach, UDiane von Furstenberg, Fred Perry, Furla, Guess, Hackett, Jimmy Choo, Kenzo, Longchamp, Marni, michael eekore, Nike, Paul & Joe, Paul Smith, Poiray, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, S.T. dupont, re, Superdry, Ted Baker, Tods, utommy hilfiger, i Kooples, Tumi, Ugg, Vanessa Bruno, Yves Salomon, Zadig & IVoltaire kwaye zininzi kangangokuba asikwazi ukubabiza ngamagama bonke.
Serravalle ezakhiwe Indlela yokuphuma, Serravalle kufuphi Milan, ElamaTaliyane
Uluhlu zokuphuma Shopping Best eYurophu akakwazi angashiyi Milan! Ukuba ujonge ukuthenga kwindawo ephezulu, UMilan uhlala ephezulu kuluhlu lwabantu abaninzi. Ngaba ubusazi ukuba ungafumana benza ekuthengeni yakho uphawu kakhulu? Tyelela i Serravalle uMyili Indlela yokuphuma ngenxa ngezaphulelo on brand fashion esitratweni enkulu kunye eliphezulu.
Isembindini weentaba Gavi. Elidityaniswe yi inkonzo yebhasi isiphekepheke ngemihla e Milan (zokuhamba time ngu. 50 imizuzu). Serravalle uMyili Indlela yokuphuma nguye yeyona mveliso inkulu eYurophu azinikele ihlabathi kamnandi zokuthenga. ngaphakathi, Ukwengeza kwi 11 azibone ukunambitha. Oku kuquka cafes zokutyela. abathandi Shopping uya kufumana engaphezulu kwe 230 Iivenkile. kuzaliswa iintlobo zamazwe Bonke, plus igama Italian enkulu labels umyili kuquka Casadei, isesisiqalo, no Missoni.
Wertheim Village, baseWürzburg, Jemani
Yonwabela utyelelo baseWürzburg, esinye sezixeko zindala German kunye site UNESCO Heritage World. Hlola yayo sites zembali ezikhumbuzo ke ukubamba uvumelana okungcono Wertheim Village Indlela yokuphuma kwizithili zokuthenga. Le lali shopping Chicken baseWürzburg inama enkulu 110 brand zalapha nezamazwe ngamazwe! Le lali nje 50 imizuzu e Frankfurt okanye 60 Imizuzu evela Nuremberg. Kukho kwakhona eateries ezininzi ukuze uhlale ngamandla ngenxa lokuthenga kwakho!
Fumana ezikumgangatho ophezulu umyili European fashion, ifanitshala, okanye izinto zasekhaya ze 30% ukuba 60% Ngaphantsi. Iintsuku abayili avuthayo surplus kwaye ngamaxesha okuseleyo babo kudala bengasekho. igcina kugesi Factory ngoku ngokuqhelekileyo zazilele phakathi elihle iidolophu ezincinci ukuya kweziphakathi. Kananjalo indawo ezingqonge amaziko asezidolophini yaye, bonke niyazi, mhlawumbi ilungelo emnyango elandelayo! Ipikniki kunye nesikhwama esitsha somntu?
Frankfurt ku baseWürzburg Uqeqesha
Nuremberg ku baseWürzburg Uqeqesha
Stuttgart ku baseWürzburg Uqeqesha
Bonn ku baseWürzburg Uqeqesha
Ukulungele ukufumana jump yakho kuloliwe kuba uhambo lwezinto ebomini? Trust Gcina A Isitimela ukuze ube itikiti khona ukutya yaye kungekho naziphi na iimali ezifihliweyo. (imali engaphezulu bethenga!)
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Of The ezithengisayo othengela Best EYurophu” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-shopping-outlets-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#Iimpawu zobunjineli #fashion #iivenkile shopping